wasaaradda hawlaha guud oo soo gabagabaysay qiimayntii wadooyinkii roobabku wax yeeleeyeen. | Ministry of Public Works & Transport in Puntland
25th July 2019 at 7:50 am By Halima Ahmed
Wasaaradda Hawlaha Guud, Gaadiidka & Guryeynta Dowladda Puntland oo mudooyinkii dambe ku hawlaneed sidii loo dayactiri lahaa Wadooyinkii waxyeeladda ka soo gaartay roobabkii gu’ga ee ka da’ay degaanadda Puntland ayaa soo gabagabaysay qiimayntii wadooyinkaas wax yeeloobay.
Enjineero ka kala socda Wasaarada Hawlaha Guud, Gaadiidka & Gureyeynta, Hay’adda Wadooyinka Puntland ee PHA iyo Hay’adda CCECC ee laga leeyahay dalka shiinaha ayaa kormeero qiimayna ku soo sameeyay Wadooyinka isku xira Gobolada Bari, Karkaar, Nugaal, Sool.
Wasiirka Wasaaradda Mudane. Axmed Bashiir Muuse ( Cirro) ayaa sheegay inay sida ugu dhaqsahaha badan dhammaan wadooyinka roobabka waxyeelada gaarsiiyeen dayactir lagu sameyn doono ayadoo lookala hor marindoono siday ukala muhiimsanyihiin.